Psycho Killer ngokuthetha iintloko - Izinto Zobugcisa
Psycho Killer ngokuthetha iintloko
Le ngoma isingenisa ngaphakathi kwentloko yombulali ophambeneyo. Kwaqala xa imvumi ekhokelayo uDavid Byrne egqibe kwelokuba abhale into emthanjeni ka-Alice Cooper, othuke kakhulu ngumsindo. U-Byrne waqala ngendinyana yokuqala, ebeka iparanoia eyingozi:
Andibonakali ngathi ndijongana nenyani
Ndixinekile kwaye ndinovalo kwaye andikwazi ukuphumla
Andikwazi ukulala kuba ibhedi yam iyatsha
Ungandichukumisi ndiyintambo yokwenyani ephilayo
Eminye i-lyric ayibalulekanga ngakumbi, ngalo mfo uyavuma ukuba ungumbulali wengqondo kwaye usilumkisa ukuba sibaleke. Kwagqitywa ngokuba yinto ebaluleke ngakumbi kunoko iingoma zikaAlice Cooper, kodwa zikholeleka: ngelixa uCooper engowomntu ohluke ngokupheleleyo kwinqanaba (uVince Furnier), u-Byrne yeyona nto ayibonayo ekuhlaleni. Akazange abulale nabani na (ukuba siyazi) kodwa unokuhlala ngokuqinisekileyo kumlingiswa.
Le yayiyingoma yokuqala yeeNtloko zeNtetho. Yabhalwa ngo-1973 kwisikolo i-Rhode Island School of Design (RISD), apho uDavid Byrne kunye nomdlali wegubu uChris Frantz babeneqela elibizwa ngokuba yiArtistics. Xa u-Byrne wayenika le ngoma, wachaza ukuba wayefuna icandelo laseJapan kwibhulorho, kodwa xa wacela intombazana eyayithetha ulwimi ukuba ize namazwi abulalayo, waqondakala ukuba uphumile. Intombi kaFrantz, uTina Weymouth, wathetha isiFrentshi, ke bamyalela ukuba abhale indawo yesiFrentshi yebhulorho endaweni yoko. Wakhuthazwa ngumlingiswa kaNorman Bates ngo-1960 u-Alfred Hitchcock Ingqondo , eyaphembelela indinyana elandelayo:
Uqala incoko awukwazi nokuyigqiba
Uthetha kakhulu, kodwa awuthethi nto
Xa ndingenakuthetha, imilebe yam ivaliwe
Yitsho into kube kanye, kutheni uyithetha kwakhona?
U-Byrne wafaka umgca we-French kwi-chorus: 'Qu'est-ce que c'est?' (Intsingiselo 'yintoni le?') kwaye bayilandela ngesilumkiso:
Baleka, baleka, baleka, baleka, baleka, baleka
Iziphumo zokugqibela yenye yeengoma ezidumileyo malunga nombulali we-psychopathic, ophenjelelwe ngamatye amabini okuchukumisa ohlobo: UAlice Cooper kunye nomdlalo bhanyabhanya Ingqondo .
Icandelo lesiFrentshi kwiBridge liguqulela kwi:
Into endiyenzileyo ngobo busuku
Into ayithethileyo ngobo busuku
Ukufezekisa ithemba lam
Ndizazisa ngokwam kwikamva elizukileyo
Oku kutyhila ukuba umbulali wengqondo ujolise kumfazi, njengoko uNorman Bates wenza Ingqondo .
UDavid Byrne kunye noChris Frantz badlale oku amatyeli ambalwa ngo-1974 kunye neqela labo Ubugcisa. Kamva kuloo nyaka, emva kokuba uFrantz noTina Weymouth bephumelele i-RISD (ngeedigri zokupeyinta), bafuduka kunye neByrne kwigumbi eliseSyummy kwisiXeko saseNew York. UTina waba ngumdlali webhasi yabo, kwaye iqela labo elitsha balibiza ngokuba ziiNtloko zeNtetho. Ukuqala ngoMeyi 1975, bafumana iigig kwiklabhu ye-CBGB yokuvula iRamones. 'I-Psycho Killer' kunye nezinye izinto zokuqala, kubandakanya 'uMqondiso weSilumkiso' kunye 'nothando luya ekwakheni ngomlilo,' babekoluhlu lwabo, bejikelezwe ngezikhuselo ezifana 'neenyembezi ezingama-96.' Bafumene ukurekhodwa kweelebheli ezahlukeneyo kwaye ekugqibeleni basayina kwiirekhodi zeSire. Emva kokongeza isiginci uJerry Harrison kwiqela, bakhupha icwecwe labo lokuqala, IiNtloko zeNtetho: 77 , Ngo-1977. Ikhutshwe njengeyodwa, 'i-Psycho Killer' yayiyeyokuqala kwitshathi yayo, yafika kwi # 92 ngo-Matshi 1978.
Uqinisekisiwe kuDavid Byrne, uChris Frantz kunye noTina Weymouth, le ngoma kuphela kwi-albhamu yokuqala ye-Talking Heads engabhalwanga njenge-solo Byrne. Iikhredithi zokubhalwa kwengoma ngokukhawuleza zaba yindawo yokuncamathela kwiqela njengoko iByrne yaba yindawo ekugxilwe kuyo kwaye yanika umbono wokuba ikwenzile konke ukubhala ingoma. UFrantz ubhale ukuba wabhala le ndinyana yesibini 'kwi-Psycho Killer,' kodwa u-Byrne ulibekelisile igalelo lakhe kwingoma, exelela UMojo , 'UChris noTina bandincedisile kwezinye izinto zaseFrance.'
Inxalenye 'yefa fa fa' ayithandeki yingoma ka-Otis Redding ethi 'Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Ingoma Ebuhlungu).' I-Redding kunye nezinye iimvumi zomphefumlo zazinefuthe elikhulu kwiiNtloko zeNtetho.
Iklabhu kaTom Tom, iqela elikhokelwa ziNtloko zeNtetho zangaphambili uTina Weymouth kunye noChris Frantz, bahlala bedlala oku kwiikonsathi zabo noTina becula ilizwi eliphambili. Iklabhu yokuqala kaTom Tom, 'Wordy Rappinghood,' ikwanazo nezinye iingoma zesiFrentshi ezenziwe nguWeymouth.
'I-Psycho Killer' yayiyinto eguqukayo kuDavid Byrne kuba iyamenza ukuba aqonde ukuba bekukho abaphulaphuli beengoma zakhe ezimnandi. Wayeyithatha 'njengengoma engenangqondo' ngelo xesha, kodwa kwakungekho mbuzo unxulumene nabaphulaphuli. Ingoma ikwangqina ukuba uBryne, uFrantz kunye noWeymouth bangazenza iingoma kunye; Emva kokuyibhala, u-Byrne no-Frantz babhale u-'Umqondiso wokuLumkisa, 'owaphela kwi-albhamu yesibini ye-Talking Heads.
IiCellos zenza yonke into ivakala ngokungathandekiyo, ke iqela lirekhode u-acoustic version kunye no-Arthur Russell edlala eso sixhobo. Yayisetyenziswa njengecala leflip elinye kwaye ibonakala kolunye udibaniso.
Kwakukho ngokwenene umbulali we-psycho ekhululekile kwihlobo le-1977, kwiinyanga ngaphambi kokuba le ngoma ikhutshwe. UDavid Berkowitz, 'uNyana kaSam,' woyikisa abantu baseNew York ngaphambi kokuba abanjwe ngo-Agasti 10 emva kokubulala abantu abathandathu. Uninzi lukrokrela ukuba le ngoma yayingaye, kodwa yabhalwa ngaphambili.
Ifilimu yeeNtetho eziNtetho zika-1984 Yeka Ukwenza Ingqondo , ikhokelwa nguJonathan Demme, ivula noDavid Byrne engena eqongeni nge-boombox, emva koko enze i-'Psycho Killer 'kwikatala ye-acoustic ekhatshwa sisingqisho somculo esasirekhodwe kwangaphambili kwiteyiphu. Kwingoma elandelayo, 'Izulu,' uzimanye nomdlali weBass uTina Weymouth. Umdumisi uChris Frantz ungena 'Enkosi ngokundithumela ingelosi,' uJerry Harrison ugqibezela ibhendi xa besenza ingoma yabo yesine, 'Fumene Umsebenzi'
'I-Psycho Killer' ikwakhona kwi-albhamu yabo ka-1982 Igama Leli Bhendi ZiNtloko Ezithethayo .
Ngexesha elinye, umlimi uTony Bongiovi wafumana imela yokuchwela ekhitshini studio kwaye wacela u-Byrne ukuba ayibambe ngelixa ecula ukuze afumane isimilo. Wala.
NgokukaChris Frantz, uBongiovi, ababelwe iilebheli zabo, kwakunzima ukusebenza naye kangangokuba iqela labiza iiseshoni zasebusuku ngaphandle kwakhe, besebenzisa injineli uEd Stasium ukurekhoda nokwenza lula.
Amagcisa agubungela le ngoma aquka iiBarenaked Ladies, i-Phish, i-Brand New, i-Local H kunye neVelvet Revolver.
I-2017 Selena Gomez hit iisampulu 'zexoki elibi' kwi-bassline kule track. UDavid Byrne akanangxaki nayo. 'Ndingaba nomcimbi ukuba umntu othile uthathe, yithi,' Oku kufuneka kube yindawo , 'eyingoma yothando lomntu, utshilo Amatye agiqekayo . 'Ngaphandle kwaleyo, ewe, phinda uyiphinde loo nto.'
UChris Frantz uyithatha njengengoma ecacileyo yeeNtloko, 'kuba zonke zixubekile.' Uxelele iiNgoma eziNgoma: 'Kuyaphambana kwaye kuyonwabisa. Luhlobo olunjengoAlice Cooper odibana noSam & Dave. Ibetha kakhulu. '
I-1144 inombolo yengelosi uthando
ukuba bendiluhlaza bendizakufa
UJackson 5 - ndifuna ubuye
lyrics sisiphelo sehlabathi njengoko sisazi
Ndiza kuba lilanga eliqaqambileyo leengoma zomhla
oku kukuphela kwengcango iingoma